53 အဘို့ရလဒ် sonic
Mario နှင့် Sonic အရုပ်
Sonic ရုပ်ဖမ်းမိသည်နှင့်သစ်သားပေါ်ဆွဲထားခံရ။ မာရီယိုထွက်ပြေး Sonic အသက်ရှုရှေ့တော်၌ထိုကြိုးမှာရိုက်ကူးခြင်းဖြင့်အသေခံမှ Sonic ရုပ်ကယ်ဖို့မိမိအလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြိုးမှာရိုက်ကူးမှမာရီယိုကာကွယ်တားဆီးဖို့လမ်းကိုအပေါ်တ္ထုရှိပါသည်။ တွေ့ပါမာရီယိုကိုကူညီပါ
လုပ်ဆောင်ချက်နည်းနည်းနှင့်အတူတစ်ဦးကပျော်စရာကာတွန်း။ အတူတကွဂိမ်းတွေကကကမ္ဘာမှအကျော်ကြားဆုံးဇာတ်ကောင်ရရှိသွားတဲ့က Final Fantasy ၏နောက်ထပ်ဗားရှင်း။ အာရုံစိုက်နှင့်သင့် mouse ကိုသုံးလော့။
ဝင်လာသောရန်သူနှင့်အတူဘောလုံးကိုတက်တန်းမှကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ။ အကျော်ကြားသူဌေးကတိုက်ပွဲများထွက်သည် Watch ။
မော်တော်ဆိုင်ကယ် Grand Prix မှကြိုဆိုပါ၏! သင့်ရဲ့အထူးဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲ Pick နှင့်ဤအေးမြ Arcade ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ကားသမားအတွက်ကြီးမားတဲ့စက်ဘီးမျိုးနွယ်ပြိုင်ပွဲ၌ Racing သွားပါ။
ဤတော၌ Chima စွန့်စားမှု, သင်အပေါက်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းဖြင့် Chima တောတွင်းထွက်ကိုကူညီသင့်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်မောက်စ်နဲ့ Chima ကိုထိန်းချုပ်ခွင့် Move, လက်ဝဲ mouse ကိုခုန်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ။
ဒိုမိုဃ်းပွင့်ကျွန်းရှိစကိတ်စီးကိုကူညီပါ။ ပိုပြီးမှတ်ဂိုးသွင်းရန်သင့်လမ်းအတွက်ကြယ်နဲ့ပန်းပွင့်စုဆောင်းပါ။ အပင်များနှင့်ကျောက်ခဲတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဆီးနှင်း surfing ခံစားကြည့်ပါ!
တစ်ဦးကချစ်စရာသေးငယ်တဲ့ Beaver အဘိဓါန်ရေကြောက်ပေမယ့်နေဆဲသူသည်မိမိအကွောကျရှံ့သောကျော်လွှား၏အိပ်မက်ကိုမြင်မက်။ တစျခုတညဉ့် Beaverlama ကသူ့အိပ်မက်၌ထငျရှားနှင့်သူ Beaverlama တွေ့ရှိလျှင်သူ့ကိုကူညီပေးဖို့ကတိပြုခဲ့သည်။ ကနေခုန်, ကြီးသောရဲစွမ်းသတ္တိ၏ Beaver အဘိဓါန်အတူခရီးကိုယူ
Halo ဂိမ်း၏ Package ကို, Mortal Kombat အကြောင်း, Final Fantasy နှင့် OTHER.Unlock ကစားသမား diferents နှင့်သင့်စွမ်းအင်ကိုသုံးလော့။
Unreal flash ကို 3
ဒီဇာတ်လမ်းသင်သည်အခြားစစ်သားများနှင့်အတူထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများတွင်ဆက်လက်ရှင်သန်ရမယ်တဲ့စစ်မြေပြင်အဖြစ်ပေးအပ်သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကောင်းသော High-powered လက်နက်များစုဆောင်းပါ။